WIILAL LA DHASHAY MO FARAH OO KU EEDEEYEY WALAALKOOD IN UU YAHAY CAASI ILOOBEY AABIHIIS IYO DADKA UU KA SOO JEEDO. - iftineducation.com
iftineducation.com – Labo Wiil oo la dhashay laacibka reer caalami ee orodyahanka adduunka iyo dalka Ingiriiska Mo Farah oo lagu kala magacaabo Mahad iyo Axmed Faarax
ayaa sheegay in Mo Farah uu iska iloobay ehelkiisii isla markaana uu noqday caasi aan dan ka lahayn dadkiisa.
Wareysi ay siiyeen jariirada The Mirror ee dalka Ingiriiska ayay ku sheegeen labada walaalo ee la dhashay Mo Farah ayay ku sheegeen in Mo Farah aanu sanado badan aabihiis Mukhtaar Faarax wax xiriir ah la sameynin, isla markaana uu yahay qof caaq ah oo dadkiisii gooyay.
Wiilashan oo aan ku hooyo ahayn Mo Farah waxay sheegeen inay aad uga xumaadeen qoyska markii uu guursaday haweeney lagu magacaabo Tania, warkaasina ay ka maqleen warbaahinta, aabihiisna uu aad uga baxay inuu wiilkiisii ka qarsado arooskiisa.
Aabaha dhalay Mo Farah waa 53 sano jir, wuxuuna dalka Ingiriiska geeyay wiilasha kala ah Maxamed Faarax oo 8 sano jir ahaa xilligasi Mahad iyo Waxiid oo Soomaaliya uu kala cararay. Wiil mataane la ah Mo oo lagu magacaabo Xasan ayaa weli ku sugan Soomaaliya.
Mo Farah ayaa la noolaa eedadaas xaafadda Hanworth ee Koonfur Galbeed London, halkaasoo uu aabihii ku dhiiri geliyay ciyaaraha fudud.